Nepal Pass | Telenor Myanmar
Roaming Pack for Nepal
25 Ks per MB
တယ်လီနော Prepaid နှင့် Star Postpaid အသုံးပြုသူများသည် special data roaming rate ကို Nepal ရောက်စဉ်တွင် 1MB လျှင် ၂၅ ကျပ် ကို (အခွန်မပါ) အပတ်စဉ်ကြေး ၇ ရက်လျှင် ၁၅၀ဝ ကျပ် ( အခွန်ပါ) ဖြင့်သာ ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
နီပေါနိုင်ငံတွင် အထူး စျေးနှုန်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Subscription ကြေးမပေးလိုသော customers များသည် ရိုးရိုးပုံမှန်ဈေး 1MB လျှင် ၂၅ ကျပ် (အခွန်မပါ) ကျသင့်မည် ဖြစ်သည်။
You are buying အပတ်စဉ်နီပေါ Pass Pack .
Nepal Pass- Data Roaming Pass Rate
အခြားပြည်ပ နိုင်ငံများသို့ ခေါ်ဆိုခြင်း
Prepaid အသုံးပြုသူများအတွက် နိုင်ငံရပ်ခြား Data အသုံးပြုမှု အထူးအစီအစဉ်
Telenor Myanmar သည်နီပေါလ်တွင်ဒေတာလွင့်တင်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်နေသည်။ ၇ ရက်သက်တမ်းမှာတစ်ပတ်လျှင် ၁၅၀၀ ကျပ်ကျသင့်သောနှုန်းထားဖြင့် MB နှုန်း ၂၅ ကျပ်ဖြစ်သည်။ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့မှစ၍ နောက်ထပ်အသိပေးစာအထိရနိုင်သည်။
ဘယ်လို ၀ ယ်ရမလဲ။
'NP7' သို့ '500' ဟုစာတိုပေးပို့ပါ
အပတ်စဉ်အတွက် ၁,၅၀၀ ကျပ်
အသုံးပြုမှုကို ဘယ်လိုရပ်ဆိုင်းရမလဲ ?
Star Post Paid အသုံးပြုသူများအတွက် နိုင်ငံရပ်ခြား Data အသုံးပြုမှု အထူးအစီအစဉ်
ဘယ်လိုရယူ ၀ယ်ယူရမလဲ ?
ယခု promotion ကို အသုံးပြုလိုလျှင် အပတ်စဉ်ကြေး (သို့်) လစဉ်ကြေး ပေးဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
လိုအပ်ပါသည်။ ၇ ရက်စာကို ၁၅၀၀ ကျပ် (အခွန်ပါ) ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဝယ်ယူမှုအောင်မြင်သွားပါက သင်သည် စာတိုလက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခု promotion ကို ဘယ်နိုင်ငံတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။
နီပေါတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
ယခု promotion ကို ထိုနိုင်ငံသို့ မသွားခင် ဝယ်ယူရန်လိုအပ်ပါသလား။
သင်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာပဲ ဖြစ်စေ၊ နီပေါရောက်နေသည်ဖြစ်စေ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
အထူးစျေးနှုန်းမှာ Data နှင့် အင်တာနက် သုံးစွဲမှု အတွက်သာ ဟုတ်ပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ (voice and sms) အတွက်မပါဝင်ပါ။
ပုံမှန်စျေးနှုန်းက 1MB လျှင် ၅၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။
ယခု Promotion စျေးနှုန်းက ဘယ်လောက်လဲ။
၇ ရက်အတွင်း 1 MB လျှင် ၂၅ ကျပ် (အခွန်မပါ)
ယခု promotion စတင်ကာလမှာ ဘယ်အချိန်လဲ။
၂၈ရက် ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၀ မှစတင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဝယ်ယူထားသော pack မကုန်သေးပဲ အသစ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသလား။
အကယ်၍ ၇ ရက်စာ ဝယ်ယူထားမှု ကုန်ခဲ့သော် မည်သို့ ကျသင့်မည်နည်း။
သုံးသလောက်ပေးမှ 1MB လျှင် ၅၀၀ ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မည်သည့် အချိန်ထိ promotion စျေးနှုန်းဖြင့် data နှင့် internet ကို သုံးစွဲနိုင်ပါသလဲ။
ယခု promotion မှာ prepaid နှင့် Postpaid နှစ်မျိုးစလုံးတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။